को हुन् यी युवा ? झापामा भेटिए अर्का भीटेन , र्‍याप देखि लिएर गेट अप पनि दुरुस्तै (भिडियो हेर्नुहोला) – Complete Nepali News Portal
को हुन् यी युवा ? झापामा भेटिए अर्का भीटेन , र्‍याप देखि लिएर गेट अप पनि दुरुस्तै (भिडियो हेर्नुहोला)
Sisir Budhathoki September 1, 2019
चर्चित र्‍यापर भिटेन युवापुस्ताले निकै मनपराएको लोकप्रिय गायक हुन् । उनका आधा दर्जन भन्दा बढी गीत हिट भएका छन् ।
र्‍याप धेरैले गाउँछन् तर शब्द, गायन शैली, टेक्निक अनि हुलिया, हरेक हिसाबले अलग छन् भिटेन। तर उनको गीतमा पनि अश्लील शब्दहरू प्रशस्तै हुन्छन्। भिटेनका गीतहरु प्राय युवा र युवतीलाइ लक्षित गरेर निर्माण गरिएका छन ।
भिटेनले प्रस्तुति दिंदा सबै दर्शकहरु एकदम धेरै उत्साहित भएर चिच्याएको देखिन्छ । उनको प्रस्तुति संगै दर्शकले पनि स्वरमा स्वर मिलाउदै कपडा उतारेर नाचेको विभिन्न कार्यक्रममा देख्ने गरिन्छ । झापाको दमकमा एक युवा भीटेन जस्तै देखिन्छन र गाउने तरिका पनि उस्तैनै छ । उनि भीटेनलाइ आफ्नो आइडल मान्ने गर्छन । साथै अर्का युवा संजय दर्नाल जसले आधुनिक गित राम्रो गाए । तल भिडियोमा हेर्नुहोला ।